Sakafo tsy hay hadinoina - Church of God of Switzerland Switzerland
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Sakafo tsy hay hadinoina
Betsaka ny olona mandeha matetika no mahatadidy ireo tsangambato malaza ho fisongadinan'ny diany. Maka sary ianao, manamboatra rakitsary sary na manamboatra azy ireo. Notantarain'izy ireo tamin'ny namany sy havany ny zavatra hitany sy niainany. Hafa ny zanako lahy. Ho azy, ny teboka avo indrindra amin'ny dia dia ny sakafo. Azony atao ny mamaritra mazava tsara ny làlana rehetra amin'ny sakafo hariva rehetra. Tena mankafy ny sakafo tsara rehetra izy.
Azonao atao angamba ny mahatadidy ny sasany amin'ireo sakafo tsy hay hadinoinao kokoa. Mieritreritra steak malefaka na trondro vao tratra ianao, na trondro vao tratra. Mety ho lovia Far Atsinanana izy io, nanan-karena tamina akora hafahafa ary voasaron'ny tsiro avy any ivelany. Angamba, noho ny fahatsorany, ny sakafonao tsy hay hadinoina indrindra dia ny lasopy an-trano sy ny mofo crusty izay nankafizinao taloha tao amin'ny trano fisotroana Scottish.
Tadidinao ve ny fihetseham-ponao taorian'io sakafo mahafinaritra io - ny fahatsapana ho voky sy afa-po ary feno fankasitrahana? Tazony ity eritreritra ity eo am-pamakianao ity andininy manaraka ao amin’ny Salamo ity: “Eny, hidera Anao aho mandritra ny androm-piainako; Ny akaiky Anao mahavoky ny hanoanana ny fanahiko tahaka ny fanasana; ny vavako no hiderako Anao, eny, ny fifaliana lehibe no avy amin’ny molotro. » (Salamo 6.3,5 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Tany an-tany efitra i David rehefa nanoratra izany ary azoko antoka fa ho tiany ny fety amin'ny sakafo tena izy. Saingy toa tsy sakafo no noeritreretiny, fa zavatra hafa, an'ny olona iray - Andriamanitra. Ho azy, ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fitiavany dia nahatanteraka toy ny fanasana fatratra.
Charles Spurgeon dia nanoratra hoe "Ao amin'ny Tahirimbolam-bolan'i David": "Ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia misy harena, famirapiratana, haben'ny fifaliana feno fanahy, azo oharina amin'ny sakafo manankarena indrindra ahafahan'ny vatana mivelona."
Rehefa nisaintsaina ny antony nampiasan'i David ilay fanoharana momba ny sakafo aho mba haka sary an-tsaina ny fahafaham-po avy amin'Andriamanitra, dia tsapako fa izay ilain'ny olona rehetra eto an-tany dia ny sakafo. Raha manana akanjo ianao nefa noana dia tsy afa-po. Raha manana trano, fiara, vola, namana ianao - izay rehetra mety tadiavinao - saingy noana ianao, tsy misy dikany na inona na inona izany. Ankoatra ireo tsy manan-kohanina dia fantatry ny ankamaroan'ny olona ny fahafaham-po amin'ny fisakafoanana tsara.
Ny sakafo dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fankalazana rehetra eo amin'ny fiainana - ny fahaterahana, ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana, ny fizarana diplaoma, ny fampakaram-bady, ary ny zavatra hafa azontsika ankalazaina. Misakafo mihitsy aza izahay rehefa avy niala an-keriny. Ny fotoana nanaovana ny fahagagana voalohany nataon’i Jesosy dia fampakaram-bady naharitra andro maromaro. Rehefa nody ilay zanaka adala, dia nanafatra sakafo andriana ny rainy. Ao amin’ny Apokalypsy 19,9 Hoy izy: “Sambatra izay nantsoina ho amin’ny fampakaram-badin’ny Zanak’ondry”.
Tian'Andriamanitra isika hieritreritra azy rehefa nahazo "ny sakafo faran'izay tsara". Ny vavoninay dia mijanona vetivety fotsiny dia voky ary avy eo dia noana indray. Fa rehefa mameno ny tenantsika amin'Andriamanitra sy ny fahatsarany isika dia ho afa-po mandrakizay ny fanahintsika. Mialà amin'ny teniny, misakafo eo amin'ny latabany, mankafy ny haren'ny hatsaram-panahiny sy ny famindram-pony, ary derao izy noho ny fanomezany sy ny hatsaram-panahiny.
Ry mpamaky malala, avelao ny vavanao hihira amin'ny molotrao hidera an'Andriamanitra, Izay mamelona anao sy mameno anao tahaka ny sakafo mihoby sy be indrindra!